ရေဒီယိုအင်တာဗျူး - Belinda Luscombe၊ "Porn နှင့် Virility to the Threat" - TIME ဆောင်းပါးကိုရေးသားသူ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်က Porn
ရေဒီယိုအင်တာဗျူး - Belinda Luscombe၊ TIME ဆောင်းပါးကိုရေးသားသူ“ Porn နှင့် Virility to the Threat”
ရေဒီယိုအင်တာဗျူးဖို့ Link ကို
အဆိုးကိုသင်အကျိုးသက်ရောက်စေ porn မှန့်အသတ် access ကိုရှိခြင်းနိုင်သလား?
by တစ်ဦးကမာတီနက်စ်၏ | နှစ်ဦးကိုယူ ဧပြီလ 04, 11: 00 AM
စမတ်ဖုန်း, အင်တာနက် access ကိုအတူ Tablet နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကြှနျုပျတို့နီးပါးချက်ချင်းရှာအံ့သောငှါသတင်းအချက်အလက်မဆိုကြင်နာရယူနိုင်စွမ်းကိုပေးပါ, ဒါပေမဲ့သူတို့သည်လည်းငါတို့လက်ချောင်းထိပ်မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုအကွေ့အကောက်များသောယုန်ပေါက်ထားပါ။
အချို့သောအမျိုးသားများကသူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအပျက်သဘောဆောင်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်ဟုဆိုသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဝေမျှသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များစွာရှိသည်။
Belinda Luscombe, အယ်ဒီတာ-မှာ-ကြီးမားတဲ့အချိန်မှာမကြာသေးမီက "ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေporn နှင့် Virility ရန်ခြိမ်းခြောက်မှု, "နှင့်သူမ9နှစ်ရှိပြီမှာအွန်လိုင်း porn ရှာဖွေတွေ့ရှိသောနောဧအမည်ရှိသောသူတယောက်အကြောင်းကိုနှစ်ဦးကိုယူပြောပြသည်။ အသက်အရွယ် 15 အသုံးပြုပုံသူနီးပါးအဆက်မပြတ်ကစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ သူအထက်တန်းကျောင်းအကြီးတန်းကြီးနှင့်ရည်းစားရှိခဲ့သည့်အခါသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူ့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌တိုက်ရိုက်အခါလိင်ဖျော်ဖြေဖို့မတတ်နိုင်ခဲ့တာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
"သူကမှာပထမဦးဆုံးကအာရုံကြောထင်ပေမယ့်ခြောက်နှစ်များအတွက်ဆက်လက်" Luscombe ကဆိုသည်။ "ဟုသူကအလွန်နုပျိုရာမှဤမျှလောက်ညစ်ညမ်း, သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ညစ်ညမ်းဖို့ထက်ကိုမှန်ကန်လူတွေကိုတုံ့ပြန်ကြောင်းမျိုး impressionable အသက်အရွယ်ကိုစောင့်ကြည့်မယ့်ဆိုလိုတာက။ ", porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု "သူကသူခေါ်မယ့်အဘယ်အရာခဲ့ကြောင်းယုံကြည်ဆီသို့ရောက် လာ. ,"
သူမက "PIED" ဟုဆေးပညာအသိအမှတ်ပြုခွအေနအေမပေးကြောင်းဆိုပါတယ်နေစဉ်, သူမကယောက်ျား၏ကြီးမားသောအရေအတွက်တူညီပြဿနာသတင်းပို့, သူတို့သည်ညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပြန်စောင့်ကြည့်ရပ်တန့်တစ်ချိန်ကပြောပါတယ်။ သူမသည်တစ်ဦးလှုပ်ရှားမှုအွန်လိုင်းတခြားသူတွေဘို့ဆော်သြယောက်ျား၏ယခုရှိပါတယ် "ဟု porn ဖြတ်။ "
Luscombe လည်းညစ်ညမ်းလူတွေကိုထိခိုက်မည်သို့သို့အချို့သောအခြားထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို shared ။
မကြာခဏလိင် ed ပတ်လည်လေဟာနယ်တစ်နည်းနည်းရှိတယ်, နှင့်လေးတွေကမြင်နေကြောင့်ဒါ porn လိင် ed ၏ဤက default ပုံစံဖြစ်လာသည်။ သူတို့ကအင်တာနက်ကိုပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ကအများကြီးမြင်နေပါတယ်။ သူတို့ဟာမကြာခဏ porn ကြယ်ပွလိင်လုပ်ပေးလမ်းကိုပုံမှန်လူတွေလိင်ပြုကြသောလမ်းကြောင်းယုံကြည်ဖို့လာနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအကျိုးသက်ရောက်မှု porn ကိုဖြတ်ပြီးလာခဲ့ပါဘူးအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခြင်းရှိသနည်း
ငါကအမြိုးသမီးမြားကိုထိခိုက်မထင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများနေ့အများကြီးလျော့နည်း porn စောင့်ကြည့်ဖို့များပါတယ်။ ကြောင်းဖြစ်ပျက်ပါဘူးပေမယ့်သူတို့က, ကအားလုံးကိုအချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ကွောငျးတှေ့ဖို့ - သူတို့က, တဖနျ porn ဖို့ "စွဲ" ရဖို့ပိုမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ အမြိုးသမီးမြားအပျေါအကျိုးသက်ရောက်မှုယောက်ျားတွေအိပ်ခန်းထဲမှာအပြုအမူတစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကိုမျှော်လင့်ကြောင်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
မိဘများကသူတို့ကိုသူတို့ကဒီသို့ run မယ်ဆိုရင်မျှော်လင့်သောအရာကိုသိစေရန်ပင်သူတို့၏ဆယ်ကျော်သက်အတွက်ညစ်ညမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုစကားပြောစဉ်းစားသင့်သနည်း